DAYACAAD shalay ka dhacday jid ku yaalla Muqdisho (Tillaabo maanta la qaaday) | Hadalsame Media
Home Wararka DAYACAAD shalay ka dhacday jid ku yaalla Muqdisho (Tillaabo maanta la qaaday)
DAYACAAD shalay ka dhacday jid ku yaalla Muqdisho (Tillaabo maanta la qaaday)
(Muqdisho) 06 Okt 2019 – Shalay subuxii ayaan isgoyska Tarabbuunka maray. Jaam ay sababeen labo baabuur ayuu isgoysku u xirnaa. Taraafiko isgoyska ma joogin, labadii baabuur ee isku dhacdayna waxay waayeen taraafiko kala xukunta, waxaya sababeen in uu isgoysku xirmo.
Waxaana ku khasbanaaday in aan Masjidka Sh. Cali Suufi ilaa isbitaalka Masaarida lugeeyo. Kaligeyna ma aheyn ee dadka dhan ayaa lugeynayay, waayo waxaa wada xirmay waddooyinka ka kala yimaada Sh.Cali Suufi, Warshadda Caanaha iyo Digfeer ee soo gala Tarabbuunka. Taraafikadii jidka furi laheedna waxaan ku soo maray isgoyska Sh. Cali Suufi iyaga oo warqaddii canshuurta weydiinaya bajaajyada.
Barqadii ayaan Twitter dhigay qoraal cabasho ah oo aan ku cabirayo silacii Tarabbuunka ka jiray, falcelin fiican ayaana laga sameeyay.
Saakay iyo galabta ayaan mar kale soo maray Tarabbuunka oo ay joogto Taraafiko baabuurta kala hageysa, aysanna ka jirin wax jaam ah. Qoraal yar oo aan ku bogaadinayo wixii aan maanta soo arkay ayaan mar kale Twitter ku soo qoray.
Fahiima Cabdi oo qoraalkii faallo ka bixisay ayaa igu tiri: “Cabashadii aan soo gudbisay ayaa ciidanka gaartay, alxamdulillah wayna qaateen” aniguna waxaa ugu jawaabay “Fahmaay waa macquul oo dowladda hadda jirto hadalheynta baraha bulshada indhaha ayay ku heysaa. In aysan Twitter iyo cabasho shaqo ku laheyn oo ay iskood isaga yimideenna waa macquul. Wayna mahadsan yihiin.”
Taliye-ku-xigeenka booliska Soomaaliyeed Zakiya Xuseen ayaa ii soo jawaabtay, waxayna tiri “Ciidan iskiis meel isaga yimaado ma jiro walaal, waana ku mahadsan tahay falcelintaada”.
Mushkiladda in la sheegsheego xalka ayay ka mid tahay. Maalmo ka hor, cod qarsoodi ah oo uu wariye soo duubay ayaa sabab u noqday in dib-u-habeyn lagu sameeyo xarunta dembibaarista (CID) oo ay silac iyo laaluush ka jireen.
Waxaan soo jeedinayaa in qof kaste oo mushkilad arko uu afka furto, si uu codkiisu u gaaro cid wax ka qaban karta, ujeedkuna uu noqdo in wax la saxo ee uusan ka laheyn dan kale, oo uusanna ugu daneyneyn koox gaar ah.
Previous articleDaba-dhilifoow DUF ku bax! Xitaa midka adeegsanayaa waa og yahay dadnimo xumadiisa!
Next articleSheekh Shariif oo qaaday tillaabo ay dad badani u RIYAAQEEN